English News – Somalia Rebuild Organization
Category : English News , Wararka Af- Soomaaliga ah
Isniin, November 24, 2014 Jaaliyadd Soomaliyed ee reer Minnesota ayaa magaalada Minneapolis xaflad casho ah oo lagu soo dhaweynayay Jaamacada Banaadir lagu qabtay Safari Hall, iyadoo ay kasoo qayb-galeen dadwayne aad u fara badan sida dhakhaatiir, ganacasado, hor-joogayaasha arrimaha bulshada, haween, ardayda Jaamacadaha iyo kuwo kale
Xafladda ayaa waxaa daahfuray, Inj. Jibriil Afyare oo ku dheeraaday wax-qabadka Jaamacadda iyo kulilyadaheeda. Waxaa kaloo hadlay Siyaad Cali oo dhawaantan loo doortay madaxa dugsiyada Minneapolis, isagoo xusay inuu diyaar u yahay hiil iyo hooba inuu la istaago Jaamacadda Banaadir.
Sidoo kale, Xafladda soo dhaweynta waxaa ka hadlay, Dr. Poul Power oo Jaamacadda Minnesota ka tirsan, isagoo sheegay inuu dhawaan ka soo laabtay Muqdisho uuna soo arkay horumarka ay sameeysay
Waxaa kaloo hadal kooban ka jeediyay Gudoomiya Ururka Dib Udhiska Somaliyeed Cumar Yusuf Nur oo amaan iyo bogaadin ujeediyay Dr.Abdirisaq iyo waxqabadkiisa ku aadan u adeega bahweynat Somaliyed,waxuuna soo dhaweyay iskaashiga dhexmaray University of Minnesota iyo Jaamcadda Banaadir
Waxaa kaloo hadlay C/casiis Maxaay oo isaguna ka mid ah samafalayaasha Soomaaliyeed, xubinna ka ah guddiga maamula Jaamacadda Banaadir, isagoo xusay in jaamacaddu ay horumar weyn sameysay.
Dr. Cabdirisaaq Axmad Dalmar ayaa hadalkii qaatay isagoo sheegay inuu Isbitaalka Al-Nuur Eye Clinic intii uu ka shaqeeynayay uu ka daweeyay cudurrada indhaha ku dhaaca dad tiradooda ay kor u dhaafeeyso 300.000 ruux oo isugu jiray waayeen, carruur iyo dhallinyaro. Wuxuuna xusay in la aasaasay isbitaalka sannadkii 1991-kii. Sidoo kale, Dr. Dalmar wuxuu xusay inay sidoo kale cudurrada indhaha ka daaweyeen dad ka yimid deegaannada Soomaalida Itoobiya iyo dalka Kenya, ayna howlo samafal ah ay ka fuliyeen gobollada dalka qaarkood.
Dr. C/risaaq Dalmar ayaa xusay in Jaamacadda Banaadir ay haatan leedahay kulliyado badan oo dhawr qaybood ka kooban, iyadoo arday fara badan ay ka kala qalin-jabiyeen, haddana kuwo ayay u socotaa wax-barashadooda. Isagoo intaas ku daray inay dhiseen xarun wayn oo Jaamacadda Banaadir ay leedahay, taasoo lagu dhisay sida uu sheegay lacagaha jaamacadda soo galay oo aysan jirin cid ka caawisay dhimasha. “Annagu ka dooni mayno caalamka lacago daneysi ah, laakiinse waxaanu ka rabnaa inay naga taakuleeyaan dhinaca aqoonta iyo agabkii loo adeegsanayo,” ayuu yiri Dr. Dalmar.
Dhanka kale, wuxuu sheegay inay jiraan barnaamij ay kala saxiixdeen Jaamacadaha Maraykanka; kaasoo qayb ka noqon doono taageerada dhinaca wax wada-qabsiga, adeegga waxbarashada iyo tayadeedaba. Isagoo intaas ku daray inay mataaneynayaan Jaamacadda Banaadir iyo Jaamacada Gobolka Minnesota; waxaan kaloo wadnaa inaanu abuurno dugsiyo sare oo heerka waxbarasho ee Minnesota ku xiran. Ugu dambeyn, wuxuu sheegay inay rajeynayaan inay Muqdisho ka dhisaan dugsiyo ay ka faa’iidi doonaan ardayda Soomaaliya jooga iyo kuwa dalka loo geeyo dhaqan-celinta
“Isniin, September 22, 2014 (HOL) — Xaflad lagu taageerayay ururka dib-u-dhiska Somalia ee loosoo gaabiyo SRO oo ah urur samafal ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.”
Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb-galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaliyeed ee gobolka ku nool, waxayna taageero buuxda u muujiyeen ururkan iyo sidii loo horumarin lahaa wax-qabadkiisa.
Martidii lagu hadallada ka jeediyay ayaa waxaa ka mid ahaa; Sheekh Xasan Jaamici, Prof. Siciid Saalax Axmed, Sheekh C/risaaq Xaashi, Prof. C/qaadir Axmed Calasoow, Sheekh Sacad Muuse Rooble, Fartuun Wali, Sheekh Axmed Buraale, Sadik Warfa, Sheekh Axmed Taajir iyo C/casiis Maaxaay.
Hawl-wadeennada ururka ayaa ka dalbaday qurbo-joogta Minnesota iyo nawaaxigeedaba sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen taageerada bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinaca waxbarshada iyo caafimaadka. Waxayna sharxaad ka bixiyeen qaabka ay is-leeyihiin way ugu haboon tahay in looga qayb-qaato taageerooyinkan, iyagoo xusay inuu qorshahoodu yahay in qof walba oo arrintan daneynaya uu ugu deeqo uruka bishii laba doolar $2.00 oo keliya.
Cumar Nuur oo u hadlay ururka ayaa ku nuuxnuuxsaday in goolka ururka uu yahay inay helaan konton kun 50,000 oo ruux oo midkiiba uu bixinayo labo doollar, ayna lacagtaas gaari doonto meeshii loogu talo-galay isagoo intaa ku daray in lacagta ay bixin doonaan wakiilka hay’adda iyo imaamka masjid ku yaalla magaalada, taasoo wax looga qaban doono dib u dhiska Somalia.
“Arrintan waxaa nagu khasbaya baahida ay noo qabaan dadkeena iyo weliba dalkeenna,” ayuu yiri Cumar Nuur oo ka mid ah mas’uuliyiinta ururka SRO oo goobta ka hadlayay.
Culummadii madasha ka hadashay waxaa ka mid ah; Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Umatul Islaam, isagoo dadka ku wacdiyay aayado iyo axaadiis munaasab ah oo uu uga gol lahaa in la taageero ururka, lagana qayb-qaato waxtarka ummadeenna iyo sidii ay u noqon lahaayeen dad wax-tar ah oo kasoo baxa kaalinta waxqabad ee uga aaddan dadkooda iyo dalka. Sidoo kale Sheekhu wuxuu ka codsaday dadweynihii soo xaadiray kulankan laba qodob oo kala ahaa inay noqdaan talo-keen ama taageere.
Abwaan Saciid Saalax Axmed oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa yiri. “Wax wanaagsan ayaa naloogu yeeray. waxaana goobta joogta culumadii oo inaga dhargiyay caddeynta iyo wanaagga waxtarnimadu ay leedahay. Muuqaal ahaana aniga waxaa ii muuqda inaynu taas ayidno taasoo macnaheedu yahay; inaynu ku raacno kalimadda oo aanu rumeysanno.”
Sidoo kale, Abwaanka ayaa intaas ku daray in ururka dib u dhiska Somalia uu dooratay magac weyn ayna waajib ku tahay inuu qof walba dareemo oo ay garab-istaagaan.
Wuxuu kaloo abwaanku ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay tacliinta isagoo talooyin iyo tusaale cajiib ah ka bixiyay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa. “Waa in lagu dadaalo saddexda qodob ee aasaasiga ah ee tacliintu ay ka shaqayso; waana isku dheelli-tirka iyo kobcinta jirka, maskaxda iyo laxawga. Marka qofku uu saddexdaas ka dhismo ayuu wax-gartaa, awoodna leeyahay. Tacliintu waxay dhistaa hanka qofka iyo shakhsiyaddiisa, taasoo ah mid aad muhiim u ah, makaas ayuuna soo baxaa qof dhamaystiran.”
Ururka dib-u-dhiska Soomaaliya waxaa la aasaasay sanadkii 2012-kii iyadoo ujeedadiisu ay tahay sidii looga caawin lahaa Soomaaliya dalka ku nool inay helaan waxbarasho dhameysitran iyo caafimaad.
– See more at: http://hiiraan.com/news/2014/Sept/wararka_maanta22-48419.htm#sthash.swsc1xD8.dpuf